I-ACS yomeleza indawo yayo kwimarike yaseSpain | Ezezimali
Ukuba kukho ukhuseleko olubonisa imeko engenakoyiswa, ayikho enye ngaphandle kwenkampani yokwakha ye-ACS. Ukuya kwinqanaba lokuba libonisa imbonakalo yezobugcisa engenasiphako ngokwenene nakuyo yonke imiqathango yesigxina: imfutshane, iphakathi kwaye inde. Ukuze abatyali mali abancinci nabaphakathi bathathe izikhundla kwezokhuseleko ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki. Ngaphandle kwezilungiso ezisengqiqweni kumaxabiso abo aya kuthi abekwe kwiiseshoni ezilandelayo. Into esempilweni ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuthobela umthetho wonikezelo kunye nebango.
Ixabiso layo kwiimarike zokulingana zikazwelonke ngoku lihamba kumanqanaba asondele kakhulu kwii-euro ezingama-41 ngesabelo ngasinye. Emva kokugqitha kwi- isithintelo esibalulekileyo seeyure ezingama-40 kwaye abekho abahlalutyi abambalwa kwiimarike zezemali abakholelwa ukuba inokuya kumanqanaba asondele kuma-euro angama-50 kwiintsuku ezizayo. Ngamanye amagama, inokubanakho ukuvandlakanywa okunokubakho okungaphaya kwaye phantse naphina kufutshane kunikezelwe ngamanye amaxabiso esalathiso sezabelo kuzwelonke.
Ngelixa kwelinye, ayinikezeli umngcipheko ogqithileyo wokuvula izikhundla ngenxa yozinzo olukhulu kwimigangatho yeshishini kwaye ethe yasebenza ekutyikityweni kweekhontrakthi ezintsha. Umzekelo, le yenziweyo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuya isebenza eUnited States kwaye ngaphandle kwamathandabuzo linokunika ixabiso inkuthazo entsha yokuqhubeka nokunyuka kwamaxabiso. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ibe yenye yezona zabelo zinenzuzo kwilizwe lethu. Ngokuphinda uhlaziye ukuba lo nyaka ubukwimivo emibini.
1 Ukuhlaziywa kwe-IPO
2 Isivumelwano esitsha se-ACS
3 Waliwe malunga neendaba
4 Iziphumo ezidityanisiweyo
5 Izikhundla zisenokuvulwa
6 Ngevolumu ephezulu yokugaya abantu
Iqela le-ACS lifunda ngokudalwa kwenkxaso-mali kuphuhliso lweeasethi zamandla ahlaziyekayo, ezinokuthi, apho kufanelekileyo, zidweliswe kwiimarike zesitokhwe. Kwelinye icala, eli nyathelo lijolise ekwenzeni lula uphuhliso lwe iiprojekthi zamandla kwimeko yexabiso elinokhuphiswano kakhulu, ngalo ndlela inegalelo ekunciphiseni ukukhutshwa ngokuhambelana neenjongo zoPhuhliso oluZinzileyo lwe-Global Agenda 2030.
Eli nyathelo libeka umdla weqela elichazwe ngu-Florentino Pérez kwicandelo lamandla ahlaziyekayo avelayo. Ngokubheja okumiselweyo inokuba yinzuzo kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi kwixesha eliphakathi nelide. Ngokunyuka okubonakalayo kwixabiso lezabelo zalo kweli xesha lide lokusisigxina. Apho kungekho mathandabuzo ukuba yinkampani eyaziyo indlela yokuziqhelanisa nemeko entsha eboniswe luqoqosho lwamanye amazwe kwaye ikakhulu emelwe ziinkampani zokwakha. Apho i-ACS ngokuchanekileyo yenye yeebhentshi zotyalo mali oluncinci naphakathi.
Isivumelwano esitsha se-ACS
Iqela le-ACS, ngokusebenzisa iPrince Contracting, inkampani yaseDragados, ifumene kwiSebe lezoThutho laseFlorida (FDOT) isaziso senjongo yokuwonga uyilo nokwakhiwa kweprojekthi ye-E4T19 yesiGaba 3B-2 kuhola wendlela u-I-95, e Iibhloko zeBroward kunye nePalm Beach. Iprojekthi liSigaba 3 se-95-yeekhilomitha (29 km) inkqubo ye-I-46.7 Express. Ngokukodwa, izakusuka eStirling Road, eBroward County, ukuya eLinton Boulevard, kwiPalm Beach County.
Injongo yeendlela ze-I-95 zokuphucula ukuhamba, ukunciphisa ukuxinana kwezithuthi, kunye nokonyusa inkonzo. Ikwajolise ekunikezeleni ngeendlela zokongeza ezongezelelweyo, ukulungelelanisa ukukhula kunye nophuhliso lommandla kunye nokuphuculwa kweendlela zokufuduka ngexesha likaxakeka kunye nenkqubo yokunxibelelana phakathi kwamaziko ahlukeneyo asezidolophini nakwimizi-mveliso kumantla esixeko saseFort Lauderdale. Esi saziso siqinisekisa impumelelo yeQela le-ACS eFlorida, oku kunjalo ukolulwa kwesithathu ngokulandelelana kwe-I-95 ukuba iya kunikwa iNkosana kule minyaka mithathu idlulileyo; Kuba yakha icandelo 3A-3 kunye necandelo 2B-3, ukongeza iiprojekthi ezintathu zibonisa ukusebenza kwe-1 yezigidi zeerandi.
Waliwe malunga neendaba
Kwelinye icala, iQela le-ACS lithetha ukuba ulwazi olupapashwe namhlanje ngu-El Confidencial apho kuthiwa i-ACS ibolekise i-462 yezigidi zeerandi kwi-vice-mongameli wenkampani, uMnu. Pedro López Jiménez, ayiyonyani kwaye icacile. Iinjongo ezimbi zenqaku lisekwe kumdaniso wamanani wedatha emibini kwimigca emibini elandelelanayo yeNgxelo yoLawulo lweNkampani yoNyaka ka-2018, leyo yomlawuli uJavier Echenique, njengesekela-mongameli weBanco Sabadell, ibhanki eyenze imali mboleko kunye nekhredithi Ukusebenza neQela le-ACS ngama-462.491 amawaka ee-euro kunye nakumlawuli uPedro López Jiménez ofumene i-759 lamawaka eeros ngenkampani yakhe yezemali iFAPIN MOBI kuqokelelo lwezahlulo.
Akumangalisi ukuba umgaqo-nkqubo wobundlongondlongo owenziwa yinkampani yokwakha yokwala zonke iintlobo zeendaba ezingenasiqinisekiso ezivela kwimithombo yeendaba eyahlukileyo ayinakulityalwa. Kwaye le yinto eyanelisa iminqweno yabatyali mali abancinci nabaphakathi abathi themba abaphathi benkampani ngaphandle kwezithunzi ezikhulu eziqhubeka nokuyijonga. Ngaphandle kwezinye iintlobo zokuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwimbono yokujonga izinto ezisisiseko.
Ukuthengiswa kweqela le-ACS ngo-2018 kufikelelwe 36.659 yezigidi zeerandi, emele ukunyuka kwe-5,0% kunye ne-9,7% ngokwemigaqo ethelekisekayo, oko kukuthi, ngaphandle kokujonga umahluko kumyinge wotshintshiselwano ngenxa yokuxabisa i-euro xa kuthelekiswa nezinye iimali kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo. Olu luvo luqinisekileyo lwayo yonke imisebenzi ikakhulu lusekwe ekukhuleni kweentengiso zaseMantla Melika, Australia naseSpain.
Ulwabiwo lwejografi lokuthengisa lubonisa ukwahluka okubanzi kweQela, apho uMntla Melika umele iipesenti ezingama-45 zentengiso, IYurophu 21%, Australia 20%, Asia 7%, Umzantsi Melika 5% kunye Afrika i-1% eseleyo. Ukuthengisa eSpain akhawunti ye-14% yentengiso iyonke. Ngelixa ngokuchaseneyo, iipesenti ezingama-82 zentengiso zigxile kumazwe amathandathu: i-United States ine-39% yetotali, i-Australia (20%), iSpain (14%), iCanada (4%), iMexico neJamani, zombini zine-3. %. Yonke iYurophu ekugqibeleni ifikelela kwi-4% yentengiso iyonke. Apho, inzuzo yeQela enenzuzo emi kwi-915 yezigidi ze-euro, ngokukhula okuqhelekileyo kwe-14,1%.
Umbuzo abatyali mali abancinci nabaphakathi baphantsi kwawo kukuba bangafika emva kwexesha ukuvula izikhundla kwixabiso lolwakhiwo. Kungabonakala kwasekuqaleni ukuba kunjalo, kodwa uhlalutyo lwabahlalutyi beengcali kwiimarike ze-equity lithetha ngokuchaseneyo. Oko kukuthi, oko izikhundla zisenokuvulwa ngexabiso lesizathu esilula sokuba ixabiso lazo liqhubeke nokukhula kwiminyaka ezayo. Nangona mhlawumbi kungenjalo ngobunzulu bendlela ebeyenza ngayo kude kube ngoku. Ngayiphi na imeko, akukho mathandabuzo ukuba isenendlela ephezulu yokunyuka apho inxenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi banokuzuza khona.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba lelinye lamaxabiso azinzileyo kwicandelo lezokwakha elinamandla eSpain. Apho kukho iqela leenkampani ezilungileyo ezidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35. Nangona ingekho ngethamsanqa kwaye ngakumbi ngenzuzo eyenziwe yi-ACS. Kwelinye icala, ikwasasaza izabelo phakathi kwabanini zabelo, nangona kunjalo kumanqanaba asezantsi kunezinye iinkampani. Ngezinga lenzala oko iindlela 5% ngentlawulo emiselweyo neqinisekisiweyo minyaka le.
Ngevolumu ephezulu yokugaya abantu
Ukuba izabelo zeli qela lokwakha zibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yokuba zinemali eninzi kuba izihloko ezininzi zithengiswa kwimarike yokutshintsha yonke imihla. Ngale ndlela, kulula kakhulu lungisa amaxabiso Ukungena nokuphuma kwiimarike zezabelo. Ukuba sisindululo kwimarike yestokhwe esiya sijolise ngakumbi kwiprofayili yomtyali mali yokuzikhusela okanye ongalindelanga ongafuni kufumana umngcipheko omkhulu kwimisebenzi yabo kwintengiso yesitokhwe.
Kwelinye icala, ixhaswa yinkxaso ekhethekileyo yeengcebiso kwicandelo labameli bezemali abo bathembela kwixabiso ngokucacileyo. Into engenzekiyo nabanye abameli abafanelekileyo be-Ibex 35. Ukuba kunjalo, yenye yeendlela esinokuthi sizenze ngalo mzuzu ukwenza utyalo-mali lwethu lube nenzuzo ngempumelelo eyodwa. Njengoko kubonisiwe kwiinyanga ezidlulileyo kwixabiso layo kwaye kukhokelele kumaxabiso ayo ngaphezulu kwe-40 euro. Ukuba sisindululo kwimarike yestokhwe esiya sijolise ngakumbi kwiprofayili yomtyali mali yokuzikhusela okanye ongalindelanga ongafuni kufumana umngcipheko omkhulu kwimisebenzi yabo kwintengiso yesitokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-ACS yomeleza indawo yayo kwimarike yaseSpain